QABEENYI OROMIYAA OROMOO QOFAAF OOLUU QABA. – OROMIYAANWANOFITIABBAATUUEGATA.ORG
QABEENYI OROMIYAA OROMOO QOFAAF OOLUU QABA.
QABEENYI OROMIYAA OROMOO QOFAAF OOLUU QABA..
Dhagaaleen suuraa irratti agartan kun qabeenya Oromiyaa keessatti argamu keessaa tokko yoo tahu inniis Bahaa Harargee Baabbile keessatti kan argamu dhaga albudaati. Babile keessatti kuufamni dhagaa albudaa fi dhagaa ijaarsaa gosoota baayyee kan argaman yoo tahu isaan keessaa ‘Granite, isa tokkoo dha. Dhagaaleen suuraa irratti agartan kun waggoota 27 ol Alamuddiniin samamaa kan turee fi ammaa kafaltii fi bu’aa tokko malee saamamaa kan jiruu dha.
Alaamuddiin malee wayta ammaa dhaabbanni lama kan warra wayyaanee itti dabalamuun sadi tahanii halkanii guyyaa guuraa jiran. Dhagaalee albudaa fi ijaarsaa kun waan baayyeef kan oolu yoo tahu Oromiyaafiis tahee ummata Baabbileetiif rakkoo dhiqamiinsa biyyee dabaluun ala bu’aa buusaa kan hin jirre tahuu isaa namuutu beeka. Dhagaan kun sadarkaa addunyaatti meeshaaleen akka burcuqqoo, siinii fi daawwitii kan irraa hojjatamu, akkasuma ijaarsi boca adda addaa faayuuf, bobbocaa fi faaydaa danuuf oola waan taheef sadarkaa addunyaatti beekkamaa dha. Qeerroon Oromoo Aanaa Baabbilee qabeenya saamamaa jiran kana akkamitti dhoorkachuu qaban kan ja’u isaanumaafin dhiisa.